Kumaandooska Turkiga oo ka hawlgalay Suuriya – SOOMAALPEDİA
Posted on May 9, 2016 by SOOMAALPEDİA
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dalka Turkiga ayaa howlgal qorsheesan waxa ay ka fuliyeen gudaha dalka Siiriya, waxa ayna bur buriyeen sida Waraahinta dalkaasi sheegeen xarumo ay lahaayeen Kooxda Daacish.
Cutubyo katirsan Kumaandooska Turkiga ayaa la sheegay in maalintii sabtida ay galeen gudaha dalka Siiriya gaar ahaan Deegaanada Waqooyi ee kuyaala dhinaca Xadka halkaas ay saldhigyo ku lahaayeen dagaalyahano katirsan Daacish.
Warbaahinta dalka Turkiga ayaa qortay in Ciidamada Turkiga ay shalay dib ugu soo laabteen saldhigyadooda kadib howlgal balaaran ay ku bur buriyeen saldhigyo ay Daacish laheed ay ka fuliyeen deegaano kuyaala gudaha Siiriya gaar ahaan dhinaca xadka Turkiga.
Howlgalka ay Ciidamada Kumaandooska Turkiga ka fuliyeen gudaha Siiriya ayaa Warbaahinta Turkiga waxa ay sheegayaan in lagu dilay ilaa 50-dagaalyahan kuwa kalana lagu dhaawacay , waxaana lagu bur buriyay xarumo ay laheed Kooxda Daacish.
Kooxda Daacish ayaa marar badan deegaano kuyaala gudaha Siiriya waxa ay kaso tuureen Gantaalo kuwaa oo ku dhacay gudaha dalka Turkiga, waxa ayna DowladaTurkiga ay dagaal xoogan kula jirtaa Kooxaha Daacish iyo kuwa Kurdiyiinta .
Kenya oo looga digay in ay xirto xeryaha qaxootiga
Manchester United blow in race for fourth with Anthony Martial facing injury lay-off